लोकसभा निर्वाचनमा बलिउड स्टार : को-को जिते, को-को हारे ?::Leading News Portal From Kathmandu
लोकसभा निर्वाचनमा बलिउड स्टार : को-को जिते, को-को हारे ?
लोकसभा चुनावमा भारतका धेरै कलाकार विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका थिए। तीमध्ये कतिपय कलाकारले आफूलाई अब्बल राजनीतिज्ञ सावित गर्दै चुनाव जितेका छन् भने कतिपयले हार बेहोरेका छन्।उत्तर प्रदेशको मथुराबाट भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार बनेकी अभिनेत्री हेमा मालिनीले लोकसभा चुनावमा जित हासिल गरेकी छिन्। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा पनि विजयी भएकी थिइन्।
चुनावको केही समयअघि भाजपामा प्रवेश गरेका भोजपुरी अभिनेता रवि किशन पनि गोरखपुर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन्। उनले समावजादी पार्टीका रामभुआल निषाद र कांग्रेसका मधुसुदन त्रिपाठीलाई हराएका हुन्।आजमगढबाट उम्मेदवार बनेका भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेशलाल यादव (निरहुवा) समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसँग पराजित भएका छन्। निरहुवा भाजपाबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारीले पनि भाजपाबाट चुनाव जितेका छन्। उनी उत्तरपूर्वी दिल्ली क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। तिवारीले कांग्रेस नेतृ दिल्लीकी पूर्वमुख्यमन्त्री शिला दीक्षितलाई हराएका छन्।अभिनेत्री जया प्रदा भने यस पटकको लोकसभा चुनावमा पराजित भएकी छिन्। समाजवादी पार्टीबाट भाजपा प्रवेश गरेकी जया समाजवादी पार्टीका आजम खानसँग पराजित भएकी हुन्।
चुनावको केही समयअघि कांग्रेले अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। चुनाव प्रचारका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएकी उर्मिला मुम्बई चुनाव क्षेत्रबाट पराजित भएकी हुन्।
कांग्रेसले यी १७ राज्यमा खाता नै खोल्न सकेन
भारतीय लोकसभा चुनावमा कांग्रेस पार्टीले १७ राज्यमा खाता समेत खोल्न सकेन। निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसले आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मुकस्मिर, उत्तराखण्ड, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, दिल्ली, ओडिसा, सिक्किम, राजस्थान, चण्डीगढ, दागर र नगर हवेली, दमन र दीव, लक्षद्वीपमा एक सिट पनि जित्न सकेन्।
यी राज्यमध्ये हरियाणामा गएको चुनावमा कांग्रेसले एक सिटमा जित हासिल गरेको थियो। यस पटक कांग्रेसले केरलमा सबैभन्दा बढी १४ क्षेत्रमा जित हासिल ग¥यो भने तमिलनाडु र पन्जावमा आठ–आठ सित जितेको छ।
मोदी सरकार सफल हो रु के भन्छ चुनावको नतिजा ? (विजयीको सूचीसहित)
भारतमा हालसालै सम्पन्न लोकसभा चुनावको नतिजा आउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाँच सय १५ क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भैसकेको छ भने २७ क्षेत्रको गणना भइरहेको छ।
चुनावको नतिजाले भारतीय जनता पार्टीलाई थप पाँच वर्ष सरकारमा सुरक्षित गरेको छ। २०१४ को नतिजा आफ्नो पोल्टामा पारेका मोदीले २०१९ को चुनावमा पनि उनको सुत्रले राम्रो काम गरेको देखिएको।
कुल पाँच सय ४२ सिटकालागि भएको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले दुई सय त्रियानब्बे सिट जितेर १० क्षेत्रमा लिडिङ गरिरहेको छ। यस्तै भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले ५१ सिट जितेर एक क्षेत्रमा लिडिङ गरिरहेको छ।
भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लाकतात्रिक गठबन्धनले मात्र तीन सय ३९ जित र ९ लिडिङ गरि ३४८ हात पार्दैछ भने विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशिल गठबन्धनले ९४ जित र एक लिडिङ गरेर ९५ सिट जित्ने देखिन्छ।
यस्ता छन् प्रमुख दश पार्टी
पार्टीको नाम जित लिडिङ जम्मा
भारतीय जनता पार्टी २९३ १० ३०३
भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस ५२ – ५२
द्रविड मुनेत्र खाजकम् २२ १ २३
युवाजन श्रमिक रेथू काँग्रेस २१ १ २२
अल इंडिया ट्रिनामोल काँग्रेस १९ ३ २२
शिवसेना १८ – १८
जनता दल (एकता) १६ – १६
विजु जनता द ४ ८ १२
भुजन समाज पार्टी ९ १ १०
तेलङ्गना राष्ट्रिय समिति ९ – ९
लोक जन शक्ति पार्टी ६ – ६
राष्ट्रिय काँग्रेस पार्टी ५ – ५
समाजवादी पार्टी ५ – ५
कम्युनिष्ट पार्टी इंडिया (माक्र्सवादी) २ १ ३
इंडियन युनियन मुस्लिम लिग ३ – ३
जम्मू–कश्मिर राष्ट्रिय सभा २ १ ३
तेलुगू देशम ३ – ३
एआईएमआइएम २ – २
कम्युनिष्ट पार्टी इंडिया २ – २
सिरोमणी अकली दल २ – २
आम आदमी पार्टी १ – १
एआईएन द्रविड मुनेत्र खाजकम् १ – १
एआईयूडीएफ १ – १
एजेएसयू १ – १
जनता दल १ – १
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा १ – १
केरला काँग्रेस १ – १
मिजो नेसनल फ्रन्ट १ – १
नागा पिपुल्स फ्रट १ – १
राष्ट्रिय जनताको पार्टी १ – १
क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी १ – १
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा १ – १
अन्य ८ – ८
जम्मा ५१६ २६ ५४२
गौतम गम्भीर पनि सा‌ंसद
भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व ओपनिङ ब्याट्सम्यान गौतम गम्भीर लोकसभा चुनावमा विजयी भएका छन् ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका गम्भीरले ३ लाख ९१ हजार भन्दा बढी मत ल्याएर आफ्ना निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका अरविंदर सिंह लवलीलाई पराजित गरेका हुन् । गम्भीर पूर्वी दिल्‍लीबाट चुनावमा उठेका थिए ।
गौतम गम्भीरको जितसँगै भारतीय क्रिकेट टोलीका स्पिनर हरभजन सिंहले बधाइ दिएका छन्। हरभजन सिंहले ट्वीटमा लेखेका छन– भारी मतका साथ जितका लागि शुभकामना गौतम गम्भीर १ भाजपालाई थप शक्ति मिल्यो ।